Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Ny fipoahan'ny COVID-19 lehibe amin'ny sambo Norveziana Cruise Line vita vaksiny tanteraka
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Nitranga ny fipoahana na dia teo aza ny fitsipiky ny Norvezy, izay mitaky ny mpandeha rehetra sy ny mpiasan'ny sambo mba ho voan'ny vaksiny amin'ny otrikaretina farafahakeliny roa herinandro mialoha ny dia rehetra.
A Lalana Cruise Norveziana sambo misy mpandeha 3,000 mahery ho any New Orleans dia nitatitra ny fihanaky ny COVID-19 tao anaty sambo.
Na dia eo aza ny fitakiana ny tsy maintsy hanaovana vaksiny ny mpandeha sy ny mpiasan'ny sambo rehetra alohan'ny hidirana, dia olona 10 no voamarina fa voan'ny COVID-19 tao anaty sambo. Norveziana Breakaway sambo sambo.
The Norveziana Breakaway niainga tany Nouvelle-Orléans ny 28 Novambra ary nokasaina hiverina any amin'ny faran'ny herinandro. Tamin'ny lalany dia nanao seranan-tsambo maromaro tany Belize, Honduras ary Mexico ilay sambo, hoy ny Departemantan'ny Fahasalamana Louisiana.
Mpandeha sy mpiasa maherin'ny 3,200 no heverina ho ao anatin'ilay sambo Norveziana Breakaway. Nilaza ny tompon'andraikitra tamin'ny fanambarana iray fa ny zotra fitsangatsanganana dia "nanaraka ny protocole confinement sy mitoka-monina araka ny tokony ho izy rehefa fantatra ny tranga vaovao sy ny fisehoana."
Rehefa tonga tany Nouvelle-Orléans, dia nandalo fitsapana ny mpandeha sy ny mpiasa tsirairay. Na iza na iza mitondra ny COVID-19 dia tsy maintsy miditra amin'ny confinement avy hatrany, na ao an-trano na any amin'ny trano fandraisam-bahiny nomen'ny tsipika fitsangantsanganana.
Nitranga ny fipoahana na dia teo aza izany Lalana Cruise NorvezianaNy fitsipiky ny, izay mitaky ny mpandeha rehetra sy ny mpiasan'ny sambo mba ho vita vaksiny amin'ny otrikaretina farafahakeliny roa herinandro mialoha ny dia rehetra.
Nalaza ny sambo sambo tamin'ny taon-dasa, rehefa nanomboka niparitaka nanerana an'izao tontolo izao ny coronavirus ary matetika no nolavina ny zon'ny mpandeha hidina. Noterena hanao confinement tao anaty sambo, ny sasany maty tany an-dranomasina, ny sasany kosa voatery nentina haingana tany amin'ny hopitaly satria niharatsy ny toe-pahasalamany. Izany dia nanosika ny manampahefana amerikana hampiato ny sambo rehetra mandritra ny volana maromaro.
Norveziana Breakaway Lalana Cruise Norveziana
Desambra 8, 2021 amin'ny 06:18
Ary tsy afaka niandry VAKSINY HAMONJY ANTSIKA izahay ! TENA!?!
Desambra 7, 2021 amin'ny 16:28
Oay, olona 19 amin'ny 3200 no .006%. Heveriko na inona na inona mba hisarihana ny sain'ny mpamaky iray "Major Outbreak." Andao isika hanampy amin'ny fampitoniana ny olombelona fa tsy hampitombo ny fikorontanan'ny saina izay mitohy mivoaka amin'ity areti-mifindra ity.
Buster Hyman hoy:
Desambra 6, 2021 amin'ny 18:09
Eny, saika mitovy amin'ilay tifitra andrana, fiovan'ny fototarazo ny VOKATRY NY TETIKA MANDRAKIZAY HAMONO OLONA.
Desambra 6, 2021 amin'ny 07:28
Ah, mitohy ny laingan'ny COVID. Alan Fine dia mazava eto hanosika ny fitantarana. Tsy ny viriosy no mahatonga ny aretina, ry vahoaka jiosy mahantra.